Ndị Seminarị Ọhụrụ Rutere America Na-ezute Pope Francis Mgbe Kwesịrị Ekwesị | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ndị seminarị America batara ọhụrụ na-ezute Pope Francis ka ewepụrụ iche
di Paolo Tescione - Septemba 10, 2020
Ndị seminarị Amerịka zutere Pope Francis n'izu a ka ha mechara ọfụma kwụrụ iche ụbọchị 14 mgbe ha rutere Rome.
Maka ndị seminarian 155 bi na kampos nke Pontifical North American College (NAC) afọ a, ọdịda ọkara afọ agụmakwụkwọ ga-adị iche na nke ọ bụla ọzọ na akụkọ ihe mere eme n'oge na-adịbeghị anya n'ihi ọrịa coronavirus.
"Ekele dịrị Chukwu na ha niile bịarutere na nchekwa", p. David Schunk, osote onye isi nke kọleji ahụ gwara CNA na Septemba 9.
"Usoro anyị mere bụ ịnwale ndị mmadụ tupu ha apụ na United States ma mesịa gaa kọleji mgbe ha rutere."
Na mgbakwunye na ịlaghachi ụmụ akwụkwọ, seminarị ahụ nabatakwara ndị seminarị ọhụrụ 33 na Rome, bụ ndị nwere ike ịga uka na St.
Ndị seminarian ọhụrụ ahụ nwekwara ohere izute Pope Francis na Sala Clementina nke Vatican Apostolic Palace tupu okwu Popeus nke Angelus na 6 September.
Fada Peter Harman, rector nke seminarị ahụ, mesiri popu obi ike na ha ga na-ekpe ekpere na-aga n'ihu na nzukọ ahụ, na-agbakwụnye: "Anyị ka si njem njem Assisi lọta, ma ebe anyị rịọrọ arịrịọ nke St. Francis maka Pope Francis".
"Biko kpee ekpere maka anyị na afọ ọhụrụ a ga-abụ nke amara, ahụike na uto mgbe niile n'ọchịchọ Chukwu," onye rector jụrụ poopu.
Ndị seminarị America ga-amalite nkuzi onwe onye na mahadum dị na Rome na pope. Mgbe emechara afọ agụmakwụkwọ 2019-2020 na klaasị n'ịntanetị n'oge mgbochi Italiantali, a kpọrọ ụlọ akwụkwọ ndị Vatican nabatara na June iji kwadebe iji kụziere mmadụ ihe nwere usoro ahụike na nchekwa ọzọ.
N'ihi ọnụ ọgụgụ nke COVID-19 ikpe na United States, amachibidoro ndị America ịbanye na Italytali ma e wezụga njem azụmahịa, ọmụmụ, ma ọ bụ ileta ndị ikwu nke ụmụ amaala Italiantali. Ndị njem niile si United States na-abata fortali maka ebumnuche ndị a chọrọ ka iwu doo onwe ha iche maka ụbọchị 14.
"Ka anyị nọ na mbido nkuzi nke mahadum, anyị na-eme nzukọ ọmụmụ ọzụzụ ụkọchukwu anyị kwa afọ n'isiokwu ndị dị ka nkwusa / homiletics, ndụmọdụ ụkọchukwu, alụm di na nwunye na ịkwado oriri nsọ, na maka ndị nwoke ọhụụ, ọmụmụ asụsụ Italian."
“Nọmalị anyị nwere ndị na-ekwu okwu mpụga, na mgbakwunye na ngalaba ọzụzụ, maka nzukọ na ọmụmụ asụsụ. Mana afọ a nwere mmachi njem, ụfọdụ nkuzi ga-abụ ngwakọ nke ngosi ederede edepụtara na ọbụlagodi ihe ngosi vidiyo dị ndụ. Agbanyeghị na o zighi ezi, ihe na-aga nke ọma ugbu a ndị seminarị nwere ekele maka ihe ahụ "
Ikwere pụtara ịdabere na Chineke.
Iwu Chineke maka ibi ndụ ka mma.
Mmụọ ozi na-eche nche: gịnị kpatara eji enye anyị ya?
Ndi Saints bi n’elu igwe amaghi banyere ahia n’elu uwa? chọpụta!
Ime na pedophilia bụ nnukwu ọnya abụọ maka Churchka Katọlik
Okpukpe: Womenmụ nwanyị anaghị eji ụmụ nwanyị egwu egwu
Ndị uwe ojii Britain kwụsịrị ime baptizim na chọọchị London maka mgbochi coronavirus